Tenderera kubva kuMac yako kuenda kune chero skrini neJustStream Pro | Ndinobva mac
Apple malaptop ave achiwedzera zvirinani mapurosesa uye mahombe skrini. Nekudaro, kuchine vanhu vazhinji vanovabatanidza neiyo yekunze skrini kana yakafanana kuti vakwanise kushanda kana kunakidzwa nemultimedia zvemukati zvine hukuru hwakanyanya uye hunonakidza. Kune akawanda maficha ayo inobvumidza iwe kuti ubatanidze kune yako komputa neizvi zvishongedzo kuburikidza nekushambadzira. Nhasi tinotaura nezve JustStream Pro.
Vamwe vashandisi vanosarudza iyo laputopu nekuti iwe unogona kuve nekombuta iyo iwe yaunogona kutora kwese kwese uye zvakare muhofisi kana kumba ine mashandiro ayo vazhinji vanoda uye havafanirwe kutenga iMac uye zvishoma Mac Pro. Neichi chishandiso unogona kuonesa chidzitiro pane chero chishandiso.
JustStream Pro, inokutendera kuti utore chidzitiro cheMac yako pane chero chishandiso
JustStream Pro ndeimwe yeaya mafomu ekuti kana iwe unayo, iwe unofunga nei usina kuva nawo zvachose. Iyo inobvumira chero chero skrini mumba kuti ive yako nyowani yekutarisa uye inozviita mumasekondi. Inoshanda nema smart TV kubva kumarudzi ese makuru: Samsung, LG, Sony, Panasonic. Iyo inowirirana neRoku neApple TV zvishandiso. Hapana maadapter kana zvimwe zvekuwedzera Hardware zvinodiwa, hapana tambo. Iwe unongofanirwa kumisikidza iyo application, batidza Mac yako kana MacBook uye unakirwe.
Chinhu chakanakisa nezve JustStream Pro ndechekuti pamusoro pekuratidzira iwo mufananidzo kune chero chishandiso, unogona kugadzirisa kutaridzika kuti ukwane TV yako kana chishandiso. Kana iri mhando iyo yainogona kutakura, iwe unofanirwa kuziva kuti iwe unogona kutarisa mavhidhiyo kana mapikicha mune zvisarudzo zvinosvika 4k.
Mutengo welayisensi yekunyorera hausvike € 22 uye unozoshandiswa pakombuta imwe chete. Iwe une sarudzo yemhuri inowanikwa, ine marezinesi anosvika matatu Macs pamutengo we € 3. Rezinesi remhuri rakakodzera kubhadhara, sezvo musiyano wemutengo hauna kunyanya uye hauzomboziva. Kudzivirira kuri nani pane kurapwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Zvimwe Zvirongwa zveMac » Tenderera kubva kuMac yako kuenda kune chero skrini neJustStream Pro
Kudzoreredza pamusika wemasheya, kuratidzwa kweThe Banker uye nezvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki paSoydeMac